Efa nandre ny taolana? Tongotra enina? | Martech Zone
Michael dia namoaka tao amin'ny bilaogy tamin'ny Mey, rehefa nitsidika izy CMS Expo, dia Plone dia iray amin'ireo lalana teo. Plone? Inona no Plone? Vao tsy ela akory izay no nahalalako…
Anisan'ny top 2% amin'ireo tetik'asa misokatra rehetra manerantany, miaraka amin'ny Mpamorona fototra 200 ary mihoatra ny 3Mpamatsy vahaolana 00 amin'ny firenena 57. Ny tetik'asa dia novolavolaina fatratra satria 2001, azo alaina ao amin'ny fiteny 40 mahery, ary manana ny firaketana fiarovana tsara indrindra amin'ny CMS lehibe rehetra. Manana ny Plone Foundation izy, fikambanana 501 (c) (3) tsy mitady tombom-barotra, ary azo alaina ho an'ny rafitra miasa lehibe rehetra.
Plone dia rafitra fitantanana atiny matanjaka tsy mampino. Ankoatra ireo fiasa momba ny rafitra fitantanana atiny mahazatra, misy vitsivitsy izay tena niavaka:
Fahaizana mandanjalanja - tsy fahita firy ny fanatanterahana ny Plone ny fananana pejy an'arivony na an-tapitrisany. Tsy voafehy tsara izany amin'ny ankamaroan'ny rafitra fitantanana atiny.
Fandehanana sy fankatoavana manokana - ny fizotra sarotra indrindra, ny fanovana ary ny fanekena dia azo ampiharina mora foana. Ho an'ireo mpanjifan'ny orinasa dia matanjaka be izy io.
Hafainganana sy fahatsorana - Haingam-pandeha haingana ny Plone amin'ny fanompoana pejy ary ny interface dia tsotra sy azo ampiasaina amin'ny mpampiasa antonony.
Toy ny ankamaroan'ny tetikasa loharano misokatra, ny Plone dia tsy hoe tsy manana vondrom-piarahamonin'ny mpamorona sy fampidinana mampino azy ireo hanampy. Saika misy 4,000 add-ons azo alaina ao amin'ny trano fivarotana an-tserasera mba hanitarana ny fiasan'ny fametrahana anao - ao anatin'izany ny fitorahana bilaogy, ny sarintany, ny fizotran'ny asa, ny fivezivezena amin'ny haino aman-jery ary ny fitaovana sosialy.
Rehefa manoratra lahatsoratra bilaogy aho dia toa misy karazana fifandraisana Indiana foana. Tsy misy hafa amin'izany ny plone. Calvin Hendryx-Parker dia mpikambana ao amin'ny birao ao amin'ny Plone Foundation ary eto Fortville, Indiana dia eto. Ny vadin'i Calvin, Gabrielle Hendryx-Parker dia nanangana ilay orinasa Six Feet Up tamin'ny taona 1999 tao San Francisco ary namindra ny orinasan-kevitra iraisam-pirenena eto Indiana izy ireo. Gabrielle koa dia mitazona MBA amin'ny marketing sy leadership amin'ny EM Lyon, France.
Nitsidika aho Tongotra enina tamin'ny volana lasa ary talanjona. Ny biraon'ny birao nohavaozina ao afovoan-tanànan'i Fortville dia toerana mahavariana. Izy ireo aza dia manana ivon-data kely misy azy ireo miaraka amin'ireo mpamorona nomaniny ho solon'izay ary fametrahana fibre hiaraka amin'ny fametrahana ny fototr'ireo mpanjifany ao Ivotoerana data. Izy ireo dia manome fampiantranoana, fampandrosoana manokana, serivisy fampidirana ary fananganana fametrahana plone ho an'ireo orinasa amin'ny siansa fiainana, fianarana ambony ary saika ny indostria rehetra manerantany.
Six Feet Up dia namoaka ny SolrIndex 1.0 vao haingana, vokatra ho an'ny Plone / Zope izay manome fahaiza-manao mihatsara amin'ny alàlan'ny fampiasana Solr, ilay sehatra fikarohana orinasa misokatra open source malaza avy amin'ny tetikasa Apache Lucene. SolrIndex dia tonga miaraka amin'ny fahafaha-mikaroka haingam-pandeha sy haingana be. SolrIndex dia azo alefa amin'ny alàlan'ny famolavolana, izay midika fa manana fahaizana mifangaro amin'ny index sy katalaogy hafa izy. Vaovao tsara ho an'ireo tranonkala izay mila manome fahafaha-manao fikarohana amin'ny toerana maro anaovana fitahirizana.
Enina tongotra izao dia manana mpiasa 20 mahery ary nanohy nitombo isa indroa isan-taona isan-taona hatramin'ny nanombohany. Fanomezam-boninahitra ny fahaizana sy ny fanampiana omen'izy ireo ny mpanjifany. Six Feet Up ihany koa no mitantana ny Plone Tune-Up Day… hetsika iray isam-bolana, tontolo andro, virtoaly hanampiana ny vondrom-piarahamonina Plone.
Tags: fitorahana bilaogyCMSrafitra fitantanana atinyafa-po ny rafitra fitantananacms lehibesarintanystreaming mediaploneenina metatra ny haavonyworkflows
Ny fitsipika manan-danja indrindra amin'ny PR Media
Valisoa amin'ny fahaleovan-tena, fifehezana ary tanjona